ကေတီဗီသို့ ကားတွေ ခေါင်းထိုးထားသည်။ ဘက်ထရီ ဆိုင်ကယ်လေးများက စီစရီ။ ကေတီဗီတို့ထုံးစံအတိုင်း မိန်းမငယ်လေးများလည်း တစ်ဖွဲဖွဲ။ ကျောင်းသူလေးများလည်း ပါချင်ပါမည်၊ အိမ်ထောင်သည်များလည်း ပါချင်ပါမည်၊ တစ်ခုလပ်လည်း ပါချင်ပါမည်။ သို့သော် ခေါင်းစဉ် က တစ်ခုထဲ ကေတီဗီ မယ်ဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံအတွက် အလုပ်လုပ်ကြတာ ဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများမည်။
အလုပ်ထဲက လူကို မေးကြည့်သည် မော်စီတုန်းကို ဘယ်လိုမြင်လဲ၊ မော်စီတုန်းကို ချစ်လား? ပြန်ဖြေသည် ပိုက်ဆံပေါ်တွင် မော်စီတုန်းကို မြင်သည် မော်စီတုန်း ၁၀၀ တန်ကို ပိုချစ်သည်တဲ့။ ကောင်းသည်။ ရှင်းသည်။ ထိုအတွက် အလုပ်လုပ်ကြသည်။ မိသားစုတွေ တစ်နယ်စီ များသည်။ ယောင်္ကျားကလည်း တစ်နယ်၊ မိန်းမကလည်း တစ်နယ်၊ ကလေးတွေက အဘိုးအဘွားတွေ အိမ်မှာ ထားကြတာများသည်။ လကုန်လျှင် ပိုက်ဆံပြန်ပို့ကြသည်။ လကုန်လျှင်တွက်သည်က ပိုက်ဆံကို ဖြစ်သည်။ စာရိတ္တဆိုတာ နားမလည်သော စာလုံးပေါင်းနှင့် အသံထွက်ဖြစ်သည်။ လူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုသည်မှာ ဘာကိုခေါ်တာလည်း? အိမ်ထောင်ရေးဆိုသည်မှာ လက်ထပ်သည်၊ ကလေးတစ်ယောက်မွေးသည်၊ တစ်နှစ်တစ်ခါ ဆုံသည်၊ တစ်ခါတစ်ရံ သတိရလျှင် ဖုန်းဆက်မည်။ ကျန်တာကတော့ သိပ်ဂရုစိုက်စရာမလို ကျရာမှ ပျော်သလိုနေပါ။
သို့သော် တိုးတိုက်သည်၊ မိုးမျှော်တိုက်တွေ ဟိုမှသည်မှ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ကားတွေ ဥဒဟို၊ စားချင်ရာကို မော်စီတုန်း ၁၀၀ တန်တွေ ဖြန့်ခင်းလျှင် စားလို့ရသည်။ အားလုံး အဆင်ပြေသည်။ ဘာလိုသလဲ? ဘာမှမလိုပါ။ သူ့ဟာနှင့်သူဟုတ်နေသည်။ သို့သော် ကျန်တဲ့လူတွေကို ဒုက္ခမပေးပါစေနဲ့ဟု ဆုတောင်းသည်။ ၀ိုင်က ကုန်သွားပြီ။ ၀ရံတာမှ အထဲပြန်ဝင်ကာ အိပ်တော့မည်။
Posted by AH at 10/31/2011 11:02:00 PM
TZH1985 November 1, 2011 at 12:47 AM
ကောင်းသည်။ ဖေ့ဘွတ်မှာ အပ်ပါဦး mgthant@mgthant.me..
Q-te November 1, 2011 at 2:04 AM
ဒေါ်လာ ၂ သိန်းခွဲတန် အရက်ပုလင်သာသောက်ပြီးရေးရင်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) November 1, 2011 at 3:21 AM
ကော်ဖီထက်ကို ဝိုင်က ပိုကောင်းနေတာကိုး
ဝိုင်ကို ပိုကြိုက်လို့ထင်ပါရဲ့ :P
တရုတ်တွေ မော်စီတုန်း ချစ်ပုံများတော့ မပြောချင်ပါဘူး
မော်စီတုန်းသာ သူတို့ဘဝ၊ သူတို့ကမ္ဘာ
သံယောဇဉ်တွေ နွေးထွေးမှုတွေ၊ ကြင်နာမှုတွေက နည်းပါးလာတယ်
တို့တွေလို ၅၀၀၀ တန်များရှိရင် ခက်ရချည်ရဲ့
မော်စီတုန်းကို ခုထက်ပိုချစ်ဦးမှာ သေချာတယ်.. :)
...အလင်းစက်များ November 1, 2011 at 3:29 AM
ကော်ဖီခွက်ကို ရှက်မိသွားသတဲ့ အဲ့ဒါလေး သဘောကျတယ်။ အရေးအသား ကောင်းတယ်။
ရုပ်ဝတ္ထုတိုးတက်တိုင်း စိတ်ဓါတ်တွေ ဆုတ်ယုတ်သွားတတ်တယ်။ နိုင်ငံရဲ့ ပေါ်လစီနဲ့များ ဆိုင်မလား။
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! November 1, 2011 at 5:43 AM
ချရေးပြတာလေးဖတ်ရင်း အတွေးတွေနဲ့ လည်သွားတယ်...အဲဒါလည်းတိုးတက်ခြင်းတစ်ဖက်ရဲ့ ဆုတ်ယုတ်မှုတွေပဲ ထင်ပါရဲ့....
AH November 1, 2011 at 12:27 PM
အပ်လိုက်ပါပြီ ကိုမောင်သန့် ခင်ဗျ..... :)
ဒေါ်လာ ၂ သိန်းခွဲတန်သာ သောက်လိုက်လို့ကတော့ ၀ရန်တာကနေ ခုန်ချပီးသား မကျူတီ... :P
မိုးစိမ့်စိမ့်လေးဆိုရင်တော့ ကောဖီမစ်လေးနဲ့ ကွေးရတာ ဇိမ်ရှိတယ်မချောရေ... အခုက အေးအေးကြီးဆိုတော့ ကော်ဖီသောက်ရင် တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်နေတယ်။ :)
ကိုအလင်းစက် နဲ့ ကအိန်ဂျယ်လှိုင်ကို လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ